IsiLatin, imvelaphi yeelwimi zothando, ukuqala kweSpanish | Uncwadi lwangoku
UJuan Ortiz | | Uvavanyo, Iintlobo, Imbali yoncwadi, Iincwadi, Ezahlukeneyo
Itafile yamatye endala evela kumaxesha aphakathi ngemibhalo yesiLatin.
IsiLatin lulwimi lwecandelo le-Italic elalithethwe kwiRoma yakudala. Namhlanje olu lwimi luthathwa njengolufileyo, oko kukuthi, ayilolwimi lweenkobe zalo nawuphi na ummi ehlabathini. Kunokuthiwa olu lwimi lwafa xa lwayeka ukuvela, ngeenxa zonke inkulungwane yokuqala; Kamva, ngokubonakala kokungafani kwayo, ukusetyenziswa kwayo kwasekuqaleni kwancipha ngakumbi, de kwaba yinto engasetyenziswayo phakathi kwabemi abaqhelekileyo.
Emva kwexesha, kwi-Middle Ages, i-Modern Age kunye ne-Contemporary Age, isi-Latin saqhubeka sisetyenziswa, kodwa njengolwimi lwenzululwazi, kwaye oku kuyaqhubeka nanamhlanje. Ukusuka kolu lwimi inani elikhulu leelwimi zaseYurophu ezaziwa ngokuba ziilwimi zothando: IsiPhuthukezi, iSpanish, isiFrentshi, isiTaliyane, isiRomania, isiGalician, isiCatalan, iAsturleonés, iAragonese, iWalloon, isi-Occitan, isiRomanesque kunye neDalmatia. Icawa yamaKatolika iyisebenzisa njengolwimi lwenkcubeko, ukongeza kwiilwimi zesintu.
1 Umlando omncinci
2 Uncwadi lwesiLatin
3 Ilifa lesiLatin
4 Iindlela zokufunda isiLatin
Ukuvela okokuqala komhla wesiLatin ukuya kunyaka ka-1000 a. C., kwingingqi esembindini ye-Italiya ebizwa ngokuba yiLazio, Latium Ngesi latin. Kungoko igama lolu lwimi kunye nabahlali bendawo, isiLatin. Nangona ubungqina bokuqala obubhaliweyo buvela kwinkulungwane ye-XNUMX BC. C.
IsiLatin ekuqaleni sasithathwa njengolwimi oluhlwempuzekileyoKe ngoko, ulwandiso lwendawo yayo lwalunomda kakhulu. Kwakungafane kuthethwe kwezinye iindawo zase-Itali, ngaphandle kweRoma.
Kwakudlule elona xesha linzima, ulawulo lwama-Etruria kunye nokuhlasela kwamaGaul, iRoma yakwazi ukuqala ukwandisa ubukhosi bayo kulo lonke elase-Itali, kwaye ngolwimi lwayo lwasasazeka. Ekupheleni kwekhulu lesi-XNUMX BC. IRoma yayiligunya, kwaye nangona amaEtruria ayeshiye uphawu lwayo kulwimi nakwinkcubeko yamaRoma, yayingamaGrike awanika isiLatin isichazi-magama esibanzi.
Ukususela kuloo mzuzu IsiLatin Latin yaba lulwimi olumanyeneyo, kuba yabekwa kwisiLatin saseLazio, nto leyo eyazisa ukuba bekukho umahluko kwizigilana. Iimpembelelo zeLazio zesiLatin zashiya uphawu lwazo kwisiLatin soncwadi. Amadoda amaninzi amakhulu amsebenzisa kwimisebenzi yabo, UMarco Tulio Cicero wayengomnye wabo.
Njengoko iRoma yayisoyisa amaphondo, ukusuka eGaul ukuya eDacia, namhlanje yiRomania, IsiLatin sandisiwe, siphuhlisa zombini njengolwimi lokubhala kwaye njenge lingua franca. Okwangoku iyaqondakala indlela isiRomania esilulwimi lwaseRomance oluvela ngqo kwisiLatin.
IColosseum yaseRoma, isiqwenga somfuziselo wokuzalwa kwesiLatin, iRoma.
AmaRoma ayesebenzisa, ikakhulu, isimbo soncwadi lwesiGrike ukubhala imisebenzi yabo. Bashiye ilifa elikhulu, bavelisa inani elikhulu leencwadi phakathi kwembali, umdlalo ohlekisayo, ukuhlekisa, imibongo, intlekele kunye nokuthetha. Nasemva kokuba uBukhosi baseRoma bumile, ulwimi lwesiLatini lwalusabaluleke kakhulu.
Uncwadi lwesiLatin lungahlulwa lube ngamathuba amabini amakhulu: uncwadi lwamandulo kunye noncwadi lwakudala. Kusele imisebenzi embalwa kuphela ukusuka kwixesha lokuqala. Ngeli xesha, ababhali uPauto noTerence zezona zidumileyo ngokubhekisele kwimveliso yoncwadi, hayi elexesha labo kuphela, kodwa lalo lonke ixesha.
Kwaye akukho manani makhulu ashiyekileyo kuncwadi lwakudala, nangona kunjalo eminye imisebenzi yafunyanwa kwakhona kwiinkulungwane kamva. Eli nqanaba lesibini yile nto ithathwa njengengqungquthela yoncwadi lwesiLatin kwaye yahlulwe yababini: iGolden Age kunye neSilver Age. Yonke into eyabhalwa emva kwenkulungwane yesibini ihlala ihoywa kwaye ihlaziswa.
Njengoko ixesha lihamba kwaye isiLatin saphelelwa ngamandla, de kwaba lulwimi olufileyo, ayizange iyeke ukusebenzisa. Namhlanje ayisetyenziswanga nje njengolwimi lweCawa yamaKatolika, ikwasetyenziswa njengolwimi lwenzululwazi ukubiza izilwanyana nezityalo, phakathi kwezinye izinto ezininzi.
Kwiimpapasho zonyango kuqhelekile ukubona amabinzana ngesiLatini, kwanezinye iimpapasho ezipheleleyo zisenziwa kule ndawo, kolu lwimi.
Kodwa, ukongeza ekusebenzeni ukubiza amanani okanye amaziko kwihlabathi loMthetho kunye nomsebenzi wezomthetho, Uncwadi lwesiLatin lushiye uphawu olukhulu. Malunga noKuvuselelwa, isitayile esihle saqwalaselwa kubabhali boncwadi lwesiLatin, olwalulinganiswa ngonembeza.
UBust kaMarco Tulio Cicero, umbhali waseRoma.
Kuyacaca ukuba ubunyani bemilingo obondle kakhulu kuncwadi lweSpanishi luzuzwe njengelifa kuluncwadi lwesiLatin. Eyokuqala ayinakubakho ukuba owesibini, omnye ngumama womnye.
Iindlela zokufunda isiLatin
Nangona isiLatini sithathwa njengolwimi olufileyo, oku akuthethi ukuba awunayo indlela yokufunda. Into yokuqala ekufuneka uyifundile naluphi na ulwimi sisichazi-magama sayo. Nge-intanethi unokufumana isichazi-magama esifanelekileyo ukukunceda ngomsebenzi wakho.
Xa ujonga uluhlu lwezichazi-magama zesiLatin ezinconyelweyo, ezi zezona zinamanqaku afanelekileyo:
Isichazi-magama sesiLatin samahlelo e-SM
I-Digital Latin Dictionary Kindle
Isichazi magama ngeengcambu zesiLatin.
Izichazi-magama zokufunda isiLatin zihlala zinemithambo kwincwadi enye okanye zinokuzisa ii-audios ukuze zikwazi ukuva ukubiza kakuhle. Ngokumalunga nelinye inqaku lesandi, i-intanethi ibonelela ngenani elikhulu lezifundo kunye nokusetyenziswa kokufunda ulwimi. Kwakhona, namhlanje, kukho inani elikhulu leefayile ze- mathala eencwadi ngemathiriyeli enkulu ngalo mbandela.
Ngokudibanisa isichazi-magama kunye nesicelo okanye ikhosi ekwi-Intanethi, ukuphatha isiLatin kuya kuba lula kwaye kuyakhawuleza. Ukudibanisa iindlela yenye yeendlela ezilungileyo zokufunda ulwimi okanye ulwimi, isiLatin asikho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iintlobo » IsiLatin: utata wezothando
Ulwazi oluhle kakhulu. kodwa kungaluncedo ukubeka izingqinisiso kule apa
Ngokutsho kwam, lo mama sisincoko, akunjalo? Ndisebenza kwithisisi yam hahaha kwaye ndiza kuyibeka njengesalathiso sephepha lewebhu